31.10.2020, Full time , Trading
•	Account Department အားလုံး၏ Full set of Account လုပ်နိုင်ရမည်။
•	AP & AR များ Daily စစ်ဆေးခြင်း။
•	Daily Cash Transaction များအား Manual & Software မှန် /မမှန် ပြန်စစ်ဆေးရမည်။
•	လချူပ်၊ နှစ်ချူပ် စာရင်းရေးဆွဲနိုင်ရမည်။
•	Budget ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။
•	ငွေစာရင်းသုံးသပ်ချက် ပြုစုတင်ပြနိုင်ရမည်။
•	စာရင်းစစ်များနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရင်ပိုကောင်းမည်။
•	Microsoft Excel အထူးကျွမ်းကျင်ရမည်။ MBC Software ကျွမ်းကျင်ပါက အထူးပိုမိုကောင်းမွန်ပါမည်။
•	စေ့စပ်သေချာပြီး လွတ်လပ်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။
•	Showroom များမှ ပစ္စည်းများ Damage ပြန်ခြင်း / မပြန်ခြင်း ၊ ပစ္စည်း Order ထပ်တက်ခြင်း၊ မတက်ခြင်း ကိစ္စများအား ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်း။
•	Warehouse မှ ပစ္စည်းများ ထုတ်ခြင်း ၊ သွင်းခြင်း ၊ ပစ္စည်းစစ်ခြင်း ၊ Damage များဖြစ်ခြင်း စသည်တို့အား မှန် /မမှန် နှင့် စနစ်ကျစေရန် Format များချပေးခြင်း။
•	Warhouse မှ ပစ္စည်းများမှန်ကန်စေရန် Stock ကောက်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်း။
•	BOD အဖွဲ့၏ လိုအပ်သည်များ ၀ိုင်းကူလုပ်ပေးခြင်း။
•	Chief Accountant ရာထူးဖြင့် အတွေ့ အကြုံ (၃)နှစ်အထက်ရှိရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။
•	Retail Business Field တွင်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	B.Com/ CPA or ACCA ရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
Job posted: 31/10/2020
•	Account Department အားလုံး၏ Full set of Account လုပ်နိုင်ရမည်။ •	AP & AR များ Daily စစ်ဆေးခြင်း။ •	Daily Cash Transaction များအား Manual & Software မှန် /မမှန် ပြန်စစ်ဆေးရမည်။ •	လချူပ်၊ နှစ်ချူပ် စာရင်းရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Budget ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	ငွေစာရင်း� ...
•	Monitor Stock in flow and out-flow of retail shop transaction as well as head office warehouse transaction. •	Weekly / Monthly stock check in Showrooms and main warehouse . •	Regular Stock audit of retail shops and warehouse. •	Stock Control and accounting format as required. •	Implementing and follow up effective internal control system.
Accountant (Code-38632) M (5)